ဂွဇွတ် လိ(ခ) နံပတ် (၃) – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဂွဇွတ် လိ(ခ) နံပတ် (၃) – KZ’s ထမင်းဆိုင်
ဂွဇွတ် လိ(ခ) နံပတ် (၃) – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Jul 21, 2014 in Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 63 comments
ပန်းကန်တွေ အဖြူအမည်းပြောင်းပြီး အသစ်ဝယ်ပြီးကတည်းက ဒီ ၂ ယောက်ကို မညှင်းရသေးလို့ တင်လိုက်တယ်။
နို့မို့ ဖွဘုတ်မှာဗျာ။ သူများတွေ ဗိုက်ဆာနေချိန်ဆို ဓာတ်ပုံတွေ တက်လာပါပြီ။ အနော်တို့ ကို ညှင်းချက်က ဂလိုပါ ဆို …
ဒီထဲမှာ ဂွဇွတ်လိ(ခ) ရရင်ဖြင့် ကိုကို ကျောက်ရယ်လေ အိမ်မပြန်ခင် ချတ်ဘောက်ကနေ မမနှင်းကို ခိုင်းထားသဗျ။
ဘယ် အသီးအနှံကို ဘယ်ပုံဘယ်နှယ် လုပ်ပေါ့ဗျာ။
ကိုယ်ဘယ်နှမိနစ် အတွင်းပြန်လာမယ်လေး ဘာလေးပေါ့။ အဲဂလို။
အဲ။ မပြီးသေးဘူးးး ချက်ပြီး ပြုတ်ပြီး သူက စားချင်နေပြီဗျ။
အဲလာ မမနှင်းက အလှဆင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို သူက စိတ်မရှည် အော်ချင်ဟောက်ချင် လုပ်သေးတာ။
မမနှင်း ဘက်တော်သား တွေ အများဂျီးရှိလို့သာဗျ။ နို့မို့ မလွယ်။
(အဟစ်။ မှတ်ပလားးး၊ ထမင်းဆိုင်ကို ၂ ပတ် နောက်ဆုတ်လိုက်ရလို့ ဖွတယ်ဟယ်။ ခိခိ)
အမှန်က အနော့ အကြိုက် အကုန် ဝက် ဟင်းတွေချည်းရွေးထားတာဗျ။
နောက်မှ ယောက်ခမွသဲကိုသတိရပြီး ငါးနဲ့ ဘဲ ကို ကြားညပ်လိုက်ရတယ်။
တနင်္လာနေ့ – ၀က်ဦးနှောက်ယိုးဒယားချက်၊ ဘဲပေါင်း၊ မှိုရေညှိ ၀က်နံရိုး ဟင်းချို၊၊ ပဲပြားပဲပင်ပေါက်ကြော်.. အချိုပွဲ-ဇီးသီး၊…သီး
1) ၀က်ဦးနှောက်ကို ဖွဖွလေးရေဆေးပြီး ဇလုံထဲမှာ ပဲငံပြာရည်အကြည် ၊ ဂျင်းရည်နဲ့နှပ်ထား ။ ကြက်သွန်နီ / ဖြူ ၊ ဂျင်းမီးဖုတ် လက်တဆစ်လောက် ၊ နနွင်း ၊ ဟင်းချက်ငရုပ်သီးမှုန့်တို့ကို ညက်နေအောင်ရောထောင်းထား (ကြိုက်တတ်ရင် မိတ်သလင်ထည့်) ၊ ဆီအတော်အသင့်ပူရင် (အရမ်းကြီးမပူရ) ထောင်းထားတာတွေကို ဆီသတ် ၊ နွမ်းလာရင် ငရုပ်သီးစိမ်းကို ဓားနဲ့ဖောက်ပြီးထည့် ။ အနံ့မွှေးလာရင် ရေ အကြမ်းပန်းကန် ၂လုံးလောက်ထည့် ၊ ဆူလာရင် အသားမှုန့် အချိုဇွန်း ၁ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီးမွှေ ။ ပြီးမှ ၀က်ဦးနှောက်ကိုထည့်ပြီး အိုးကို သာသာလေး မကပ်အောင်/သမအောင်လှုပ်ပေးပါ ။ ဆီအရမ်း မပြန်ခင် ကြိုက်တတ်ရင် ကြူးဆိုင် လက်တသစ်လောက် စဉ်းထားတာလေး ထည့်လိုက်ရင် အတော်ကိတ်ပါ၏…. ဤကား အစပ်ချက်နည်း… 2) ကျောက်စ်ရဲ့ အလွယ်ဘဲပေါင်းနည်းက…. ဘဲကို အတုံးကြီးကြီး (တစ်ကောင် ၄ခြမ်း) တုံး ၊ ဖင်ဆီဖူးဖြုတ် (မကြိုက်ဘူး) ၊ ဂျင်းရည် (စားပွဲတင် ၁ဇွန်း) ၊ သကြား (အချိုဇွန်း ၁ဇွန်း) ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက် (စားပွဲတင် ၁ဇွန်း) ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည် (စားပွဲတင် ၁ဇွန်း) ၊ ဆား အနည်းငယ် ၊ Chinese5Spices (အချိုဇွန်း ၁ဇွန်း) ၊ နာနတ်ပွင့် ၁ပွင့် ၊ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက် လက် ၂လုံးခန့် ၊ ဟင်းချက်ဝိုင် (စားပွဲတင် ၁ဇွန်း) နဲ့ သမအောင်နယ်ပြီး ရေခဲသတ္တာအောက်ဆင့်မှာ ၂နာရီလောက်နှပ်ထားပါ ။ ပြီးမှ ရိုက်စ်ကွတ်ကာ (သို့) ပေါင်းအိုးထဲမှာ ဆီတွေထွက်လာအောင် လုံးလိုက်တယ် ။ ဆီဖျစ်ဖျစ်မြည်လာရင် ဂျင်းမီးကင် လက် ၂လုံးစာလောက် ထုထောင်းထည့် ၊ အနံ့မွှေးပြီး ဘဲအရည်ပြား အရောင်ပြောင်းလာရင် ရေ ဖန်ခွက် ၂လုံးလောက်ထည့်ပြီး ဘဲနူးအောင်တည်လိုက်တယ် ။ ဘဲသား အရမ်းကြီးမနူးခင် ပဲပြား မှိုခြောက်ထည့် အရသာ အသားမှုန့်နဲ့ပြင်ပြီး… လက်စသတ် ၊ နူးရင် ကြိတ်လို့ရပြီ ။ ဘဲဂေါင်းနဲ့ လည်ချောင်းကတော့ တုံးပြီး ကြံမဆိုင်နဲ့ ဟင်းချို ချဉ်စပ်ချက်… ဂွဒ်၏
အင်္ဂါနေ့ – ငါးဆုပ်ဆန်လှော်ဟင်းလေးဆမ်း…ငါးဆုပ်လုံးလေးထမင်းထဲထည့်အုပ်စား..ဘယာကြော်ရွရွလေး ကိုက်..
1) ငါးခြစ်သား ၊ ငါးခူ ၊ ငါးရံ့အကွင်းလိုက်တုံးထားတာတို့နဲ့ ချက်လို့ရပါတယ် ။ ငါးခူငါးဆုပ်ကတော့ ပိုပြီးစားလို့ကောင်းပါတယ် ။ ငါးအသားလွှာ ၃၀သားလောက်ကို ထုံးစံအတိုင်း နနွင်း ဆား ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ ဆန်မှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ ငါးဆုပ်ထောင်းပြီး အရွယ်တော်လုံးထားပါမယ် ။ အနှစ်အတွက် ပဒဲကော လက် ၂သစ်ခန့် ၊ ဂျင်း ၁တက် ၊ ကြက်သွန်နီ ၁ဥ ၊ စပါးလင် အရင်းပိုင်း လက် ၂သစ်ခန့် ၊ ငရုပ်သီး ဟင်းချက်မှုန့် စားပွဲတင် ဇွန်း တဝက်သာသာလောက်ကို ရောပြီး ညက်နေအောင်ထောင်းထားပါမယ် ။ ဆန် စားပွဲတင် ၂ဇွန်းမောက်မောက်ကို မီးအသင့်အတင့်နဲ့ ညိုရောင်သမ်းလာအောင် လှော်ပြီး ညက်နေအောင် ထောင်းထားပါမယ် ၊ အရမ်းမှုန့်သွားစရာမလိုပါဘူး ။ ဟင်းအနှစ်ကို ဆီ စားပွဲတင် ၃ဇွန်းခန့်နဲ့ ဆီသတ်ပါမယ် ၊ ကြိုက်တတ်ရင် ငရုပ်သီးစိမ်း ဓားနဲ့ မွှန်းပြီးထည့်ပါ ။ မွှေးလာရင် ဆန်လှော်ထည့်ပြီး နှံ့သွားအောင်မွှေပေးရပါမယ် ။ အတော်လေး လုံးသွားမှ ရေ ဖြည်းဖြည်းချင်း လောင်းထည့်ပြီး မွှေပေးပါ ၊ စပါးလင် အပေါ် အဖျားပိုင်းကို ထုထောင်း ထုံးပြီးထည့်ပါ ။ ရှမ်းနံနံ ၊ ငရုပ်ကောင်းစေ့တွေပါ အပူအစပ်ကြိုက်ရင် ထည့်လို့ ရပါသေးတယ် ။ ရေပွက်ပွက်ဆူလာရင် လုံးထားတဲ့ ငါးဆုပ်တွေထည့် ၊ ခဏနေရင် နှစ်သက်ရာ အရွက် တစ်မျိုးရော နွမ်းသွားရင် အရသာပြင်ပြီး စားလို့ရပါပြီ ။ ကျနော်ကတော့ လက်သင့်ရာ မုန်ညှင်းစိမ်းအရွက်တွေထည့်ပါတယ် ။ မျှစ်ပြုတ် ၊ ကနဖော့ ၊ ဘူးသီး ၊ ပိန္နဲသီးစိတ် … အဆင်ပြေရာ ထည့်လို့ရပါတယ် ။ ဟင်းရည်က ပူစပ်ဆိမ့် အတော် အရသာရှိတာမို့ ခံတွင်းမြိန်စေဖို့ အာမခံတယ်ဗျို့… 2) ကုလားပဲခြမ်းကို တစ်ညရေစိမ်၊ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီး မညက်တညက်ထောင်းထားပါ။ လေးစိတ်ကွဲအောင်ထောင်းထားသော စမုံစပါးအနည်းငယ်၊ငရုတ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီး အနည်းငယ်၊ စားဆိုဒါအနည်းငယ်တို့ကိုရောပြီး ထောင်းထားသောပဲဖြင့်နယ်၍ အရွယ်တော်လုံးပြီး ဆီများများဖြင့်ကြော်ပါ။ သတိပြုရန်မှာ ဘယာကြော်အနှစ်များ ရေအရမ်းမခြောက်ရန်နှင့် မီးအရမ်းမပြင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ – ၀က်နံရိုးနုသစ်တိုသီးချက် ၊ ဘူးသီးအရည်သောက်၊ ခရမ်းချဉ်ငရုတ်ပွငါးပိချက်၊ တို့စရာ-zucchini..အချိုပွဲ-ဂျယ်လီ
ချက်နည်းက မခက်ဘူး သစ်တိုသီးပဲလိုတာ ။ ကျောက်စ်တို့က မော်လမြိုင်ဘက်ကလက်ဆောင်ပေးတဲ့ သစ်တိုသီးတွေကို ပါးပါးလှီး သန့်စင်ပြီး သယ်လာတာလေ ၊ ဒီရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ကြာကြာခံအောင် ခဲထားရတာပေါ့ ။ ချက်မယ်ဆိုမှ ထုတ်ပြီး ပဲငံပြာရည်အကြည် ဂျင်းရည်တို့နဲ့ နှပ်ထားတဲ့ ဝက်နံရိုးနုကို ငရုပ်သီးဟင်းချက်မှုန့် ၊ နနွင်းမှုန့် ၊ ကြက်သွန်နီ/ဖြူ ၊ သစ်တိုသီးတွေရောပြီး မီးအနေတော်နဲ့ လုံးချက်လေး ချက်လိုက်တာ ။ ဆီလား… သဘောလောက် စားပွဲတင် ၁ဇွန်းဆိုရပြီ ။ ချဉ်စပ်ကလေး ခံတွင်းလည်းရှင်း အရသာလည်း ကောင်းမှကောင်း..
ကြာသပတေးနေ့- ငါးမြွေထိုးအကောင်ကြီးကို ချဉ်စော်ကားသီးအချဉ်ထည့် မုန်ညင်းထုပ်အုပ် ဆီကျန်ရေကျန်ချက်..ကောင်းချက် ..ကြက်ဥငရုတ်ပွကြော်နဲ့လည်း လိုက်မှလိုက်..ထမင်းမြိန်တာ..ပြီးတော့ သရက်သီးဂျယ်လီလေးစား.
1) ငါးမွေထိုးက ဒီနိုင်ငံမှာ မရနိုင်တာမို့ မြန်မာနိုင်ငံဖွား ငါးမွေထိုးကို သယ်ခဲ့တာပါ ။ အကောင်ကြီးလေ အဆီများလေမို့ တချို့က ညှီစော်နံတယ်ဆိုပြီး မကြိုက်ကြပါဘူး ။ ကျောက်စ်ရဲ့ နည်းကတော့ ငါးမွေထိုးအကောင်ကြီးတွေကို မီးဖိုပြာနဲ့နယ်ပြီး ရေစင်အောင်ဆေးပါတယ် ။ ပြီးမှ ဗိုက်ခွဲ ၊ ခေါင်းဖြုတ် ၊ အရွယ်တော်တုံး ၊ မကျည်းသီး အနှစ်နဲ့ နောက်တစ်ခါနယ်ပြီး ၁၅မိနစ်လောက် နှပ်ထားပါတယ် ။ အဲဒါမှ အညှီနံ့ပျောက်မှာပါ ။ ပြီးမှ ရေပြန်ဆေး ၊ နနွင်း ၊ ငရုပ်သီးဟင်းချက်မှုန့် ၊ ငံပြာရည် ၊ ဟင်းချိုမှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ သေသေချာချာနယ်ပြီး ထပ်ထားပါတယ် ။ နာရီဝက်လောက်နေရင် စပါးလင်နဲ့ဂျင်း လက်တစ်ဆစ်လောက်ကို ငရုပ်သီးဟင်းချက်မှုန့်နဲ့ ရောထောင်းပြီး ဆီသတ်ပါတယ် ။ အနံ့မွှေးလာရင် နှပ်ထားတဲ့ ငါးမွေထိုးတွေကိုထည့် ၊ သာသာလေး သမအောင် အထက်အောက်လှန်ပေးပြီး မကျည်းရည် အနည်းငယ်နဲ့ လုံးလိုက်ပါ ငါးမွေထိုးတွေ မာမာလေးဖြစ်သွားရင် ရပါပြီ ။ ကြာကြာအထားခံအောင် သယ်လာရမှာဆိုတော့ အကျက်ချက်လို့ မဖြစ်ဘူးလေ ။ ငါးမွေထိုးဟင်း အေးသွားရင် သယ်လို့ လွယ်ပြီး မသိုးအောင် ဗူးထဲထည့်ပြီး ခဲထားလိုက်ပါတယ် ။ ချက်ခါနီးတော့မှ ငရုပ်သီးခွဲကြမ်းကို ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ထောင်းထားတာနဲ့ဆီသတ်ပြီး ၊ စားနိုင်သလောက် ငါးမွေထိုးဟင်း (ရေခဲပျော်ပြီး) ကိုထည့် ၊ ဆီပြန်လာရင် ချဉ်စော်ကားသီးခြောက် ရေစိမ်ထားတာကိုထည့် ၊ ရေဆူရင် အရသာပြင်ပြီး နှစ်သက်ရာ အရွက်ကလေးအုပ်လိုက်ရင် ထမင်းမြိန်စေမည့်ဟင်းကောင်း တစ်ခွက်ရပါပြီ….။ 2)
ကြက်ဥ ၄လုံးကို ငန်ပြာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်ပြီး ခပ်ကြာကြာပွနေအောင် ခေါက်ထားပါ..ငရုတ်ပွစိမ်းအရှည်မျိုးကို မထူမပါးလှီးပြီး အစေ့ထုတ်ပါ..ခေါက်ထားတဲ့ကြက်ဥထဲကို ခုနငရုတ်သီးများထည့်ပြီးကြော်ပါ..အရသာရိုးရှင်းပြီး ငရုတ်ပွနံ့မွှေးနေတဲ့ကြက်ဥမွှေကြော် ရပါပြီ
သောကြာနေ့ – ၀က်ပေါင်ကို ၀ိုင်နဲ့ပေါင်းထားတာရယ်..zucchini အသုပ်ရယ် နှစ်မျိုးတွဲစားတော့ လိုက်တာပဲ..အချိုပွဲ- ချယ်ရီ
1) ဒါကလေးကတော့ ဝက်ပေါင်သားပေါင်း စတူးပါ ၊ မဲမဲတူးတူးကြီး အာရုံသိပ်မလာလို့ ပဲငံပြာရည်အနောက် မသုံးထားပါဘူး ။ ဝက်ပေါင်ကို ဟင်းချက်ဝိုင် သကြား ဆားနဲ့ နယ်ပြီး ရေခဲသတ္တာထဲမှာ အနည်းဆုံး တစ်ညသိပ်လောက် နှပ်ထားပါ (အဟိ… ဒီဝက်ပေါင်က ခဲထားတာ ကြာပေါ့) ။ ချက်ခါနီးမှ ဝက်ပေါင်ကိုထုတ်ပြီး အပြင်အခေါက်တွေ နီရဲသွားအောင် သကြားလှော်နဲ့ အိုးကင်းပူတိုက်ပါတယ် ။ ပြီးရင် ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှာ ရေသင့်ရုံထည့် ၊ ဂျင်းလက်တစ်ဆစ် ဓားပြားရိုက် ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်နဲ့ရောပြီး ပွက်ပွက်ဆူသွားအောင် တည်လိုက်ပါတယ် ။ ပြီးမှ ဝက်ပေါင်ကို ထမင်းပေါင်းအိုးအပေါ်က ဇကာထဲဆယ်ထည့်ပြီး ၁နာရီလောက်ပေါင်းလိုက်တာ နူးအိသွားပါလေရော ၊ ဒါပေမယ့် အခေါက်ကအဆီတွေ အောက်က ပေါင်းခံရည်ထဲစစ်သွားတာမို့ မအီပါဘူး ။ ပြီးမှ ကန်စွန်းရွက် (သို့) မုန်ညှင်းစိမ်းကို နွမ်းသွားအောင် အိုးကင်းပူတိုက် ၊ ဝက်ပေါင် ပေါင်းခံရည်နဲ့ရောပြီး အရသာပြင်လိုက်ရင် ရှယ်ပါပဲ ။ ကျောက်စ်ကတော့ အနံ့မွှေးအောင် ဂျင်းချောင်းပါးပါးလှီးထားတာ အပေါ်က ဖြူးလိုက်တယ်လေ… မိုက်စ် 2) ဂျပန်သခွားကို ခြစ်နဲ့ခြစ်ပြီးသားကို ကြက်သွန်စိမ်းပါးပါး၊ပဲမှုန့်အနည်းငယ်၊ဆီပါလေရုံ၊ကြက်သားမှုန့်တို့နဲ့ခပ်ဖွဖွနယ်၊သံပယိုသီးညှစ်၊အကြမ်းမှုန့်နည်းနည်းထည့်၊ဆားနောက်ဆုံးမှထည့်နယ်ပါ။အရသာကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရပြီဆိုရင် အအီပြေစေမယ့် ဝက်ပေါင်သားပေါင်းနဲ့လိုက်တဲ့ သောက်ဆမ်းသခွားချဉ်သုပ် ရပါပြီ
စနေနေ့ – ”မိုးကလေး မဆိုစလောက်..ဒန်ပေါက် ပိုမောက်”
ကျောက်စ်တို့အရပ်က စိနတိုင်းဆိုတော့ အိန္ဒိယစာ အနှီဒံပေါက်က စိတ်ရှိတိုင်းဝယ်စားဖို့ မလွယ်လှပါဘူး ။ ဆိုင်မရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှိတော့ရှိပါရဲ့ အရောင်အဆင်းကလည်း စွဲမက်လောက်ဖွယ်မရှိ ၊ အနံ့အရသာကလည်း ချိုချိုရဲရဲ ပါးစပ်ထဲမှာ အာမထိလျှာမထိမို့ စားချင်ရင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ၊ အိမ်မှာပဲချက်စားရတာပေါ့ ခင်ဗျာ ။ မချက်တတ်ခင်ကတော့ အတော်လက်ဝင်မယ် ထင်ထားခဲ့ပေမည့် တကယ်တမ်းတော့ ထမင်းနဲ့ဟင်း သက်သက်စီချက်တာထက်စာရင် အချိန်ကုန်သက်သာ လူလည်းသက်သာပါတယ် ။ ကိုင်း… ကျောက်စ်ရဲ့ မြန်ဆန်လွယ်ကူ ကြက်သားဒံပေါက်အစိမ်းဖောက်ကလေးကတော့ ဒီလိုပါခင်ဗျာ ။ ကြက် အရွယ်တော် ၆၀သားလောက် တစ်ကောင်ကို ခေါင်းတွေ ခြေထောက်တွေဖြတ်ပြီး လေးပိုင်းပိုင်း ၊ ဆား အချိုဇွန်း ဇွန်းတဝက် ၊ နနွင်း အချိုဇွန်း ဇွန်းတဝက် ၊ ပဲငံပြာရည် အကြည် စားပွဲတင် ၂ဇွန်း ၊ ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင် ၁ဇွန်းနဲ့ နယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအောက်ဆင့်မှာ တစ်ညလောက် နှပ်ထားလိုက်ပါတယ် ။ နောက်နေ့ရောက်မှ ကြက်သွန်ဥနီ တစ်လုံးကို ပါးပါးလှီး ၊ ဟင်းချက်ထောပတ် (Gee) စားပွဲတင် ၃ဇွန်းနဲ့ ရိုးရိုးဆီ စားပွဲတင် ၃ဇွန်းရောထားတဲ့အထဲမှာ ရွှေညိုရောင်ပေါက်လာအောင် ရွရွလေးကြော်ပြီး ဆယ်ထားလိုက်ပါတယ် ။ ဒံပေါက်ဆန် (Basmati Rice) နို့ဆီဗူး ၂လုံး (500g ခန့်) ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှာ ရေပုံမှန် ၊ ဆား အချိုဇွန်း ၂ဇွန်းနဲ့ မိနှစ် ၂၀လောက် စိမ်ထားပါတယ် ။ ပြီးမှ အဲသည့်ဆီထဲကို သစ်ကြပိုးခေါက် လက်တဆစ်လောက်ထည့်ပြီးဆီသတ် ၊ မွှေးလာရင် နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားတုံးတွေကို တစ်ခုချင်းထည့်ပြီး မီးအနေတော်နဲ့ အရောင်ရဲပြီး အရေခွံတင်းလာရုံတင် ကြော်လိုက်ပါတယ် ။ ကြက်သားတုံးတွေ အရောင်လှသွားရင် ပြန်ဆယ်ပြီး ဆီကို သင့်တော်ရုံလောက် ပြန်လျှော့ပါ ။ ကြေညက်အောင်ထောင်းထားတဲ့ ဂျင်း စားပွဲတင် ၂ဇွန်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ စားပွဲတင် ၂ဇွန်း ၊ ဒံပေါက် မဆလာ (ဖာလာစေ့ ၃စေ့ ၊ လေးညှင်း ၆ပွင့် ၊ ဇီးသီးခြောက် သို့ သံပုရာသီးခြောက် တစ်လုံး မပါရင် ထည့်ပါ) 50g ၊ ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင် ၅ဇွန်း ၊ နို့စိမ်း စားပွဲတင် ၂ဇွန်း တို့ကို သမအောင်မွှေ၍ ကြက်သား ၊ ဆီလက်ကျန်နဲ့ ရောပြီး မီးမျှင်းမျှင်းမှာ ၁၀-၁၅ မိနစ်လောက် လုံးချက်လေးချက်လိုက်ပါ ။ အိုးမကပ်အောင် သာသာလေး မွှေပေးပါ ။ ရေစိမ်ထားတဲ့ဆန်တွေကို ပေါင်းအိုးထဲမှာပဲ ၄ပုံ ၃ပုံလောက်ချက်ပါ ( ပေါင်းအိုးထဲကထမင်း ရေခမ်းစပြုချိန် ) ။ ထမင်းအနေတော်ပြီဆိုရင် ခလုပ်ပိတ်၍ ထမင်း အပေါ် ၄ပုံ ၃ပုံလောက်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ ။ လက်ကျန်ထမင်းအပေါ် ချက်ထားသော ကြက်သားနဲ့ ဟင်းအနှစ်များကို ဖြန့်ထည့်လိုက်ပါ ။ အပေါ်က ကြော်ထားတဲ့ကြက်သွန်တွေ ဖြူးလိုက်ပါ ။ ဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ ထမင်းကို မုံလာဥနီ အတုံး ၊ ပဲစိမ်းစေ့ ၊ သီဟိုဠ်စေ့ ၊ စဗျစ်သီးခြောက်များနဲ့ အလွှာလိုက် ဖြန့်ထည့်ပါ ။ ကြိုက်တတ်ရင် ကရဝေးရွက်လည်း ထည့်ပါ ။ ပြီးမှ စဉ်းငယ်ခန့် Zarda အရောင်မှုန့်ကလေး ထမင်းပေါ် ကျဲကျဲလေးဖြူးပြီး ၁၅မိနစ်လောက် ပေါင်းအိုးခလုပ်ပြန်နှိပ်၍ နှပ်ထားလိုက်ပါလျှင် အထူးစပါယ်ရှယ် အရောင်စုံ အရသာထူး ကျောက်စ်ဒံပေါက်ကို ရပါပြီ ။
တနင်္ဂနွေ – ၀က်နံရိုးကုလားပဲဟင်းရည်၊ ၀က်ဆီဖတ်zucchiniဥနီကြော်၊ သရက်ချဉ်သုပ် …
1) ဝက်နံရိုးနဲ့ ပဲကတော့ လွယ်ပါ့ဗျား ၊ ကျောက်စ်တို့ကတော့ ဖဲဝိုင်းဟင်းလို့ ခေါ်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖဲဝိုင်းမှာ ဖဲစားမာန်တက်ရင်း ချက်ကြတာမို့ရယ် ၊ နောက်ပြီး ထမင်းဇလုံထဲကို ဟင်းရည်ဆမ်းပြီး အလွယ်တကူစားလို့ရတာကြောင့်ရယ်ပါ ။ ချက်ပုံချက်နည်းကတော့ ကုလားပဲခြမ်းကို ပွသွားအောင်ရေစိမ် ၊ ဝက်နံရိုးကို ဆား ၊ အသားမှုန့် ၊ ဂျင်းရည် နဲ့ နယ်ပြီးနှပ်ထားပါတယ် ။ ချက်တော့မယ်ဆိုမှ ပဲနူးရုံလောက်တင် ပြုတ်လိုက်ပါတယ် ။ ဝက်နံရိုး နှပ်ထားတာကို ကြက်သွန်နီ/ဖြူ ဂျင်းမီးကင် နနွင်း ငရုပ်သီးဟင်းချက်မှုန့် ဆီအနည်းငယ်နဲ့ လုံးပြီးချက်လိုက်ပါတယ် ၊ ဝက်နံရိုးနူးပြီး ဆီပြန်စပြုလာရင် ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက် အနည်းငယ်နဲ့ ကုလားပဲပြုတ်ကိုထည့်ပြီး ဆီပြန်သွားအောင် မွှေပေးလိုက်တာ အိုးကပ်ခါနီးမှ ရေထည့် မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ လွှတ်ထားလိုက်တာပဲ ။ ဟင်းရည် အတော်ဆူလို့ ဝက်နံရိုးတွေနူးမှ အသားမှုန့်ထည့်ပြီး အရသာပြင် ၊ ဟင်းအိုးချပြီး မီးပိတ်လိုက်ရင် ကျောက်စ်ရဲ့ဘော်ဘော် ဖဲသမားတွေ တန်းစီပြီး ဆွဲတော့တာပဲ ခီညား ။ Zucchini နဲ့ မုန်လာဥနီ အစိမ်းကြော်ကတော့ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး ။ ကျောက်စ်ကတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော်ရင် မီးပြင်းပြင်းနဲ့ ခဏပဲကြော်တာမို့ ဇကာထဲမှာ ခပ်သေးသေးလှီးထားတဲ့ အသီးအရွက်တွေထည့် ၊ ဝက်ဆီဖတ်လေး သေးသေးတုံးပြီးထည့် ၊ သကြားလေး ဖြူး ၊ ခရုဆီလေးဆမ်း ၊ အပေါ်က ကြက်သွန်ဖြူ ဓားပြားရိုက်လေး အပုံလိုက်တင်ပြီး ဆီအတော် ပူပူမှာ ဆတ်ကနဲထည့်ပြီး ရှဲ လိုက်တယ် ခင်ဗျ ။ မီးပြင်းပြင်းမှာ ၁မိနစ်လောက် စားသောက်ဆိုင်က အကြော်ဆရာ ပေါက်ဖော်ကြီးစတိုင်နဲ့ ရှဲပြီးရင် နှမ်းဆီလေး ၂စက် ၃စက်လောက် ဖြန်းပြီး မီးချလိုက်တာပဲ ။ စားကြည့်ပါ… စားသောက်ဆိုင်က လက်ရာလောက်တော့ အေးချေး…. 2) သုပ်ရန်သရက်ချဉ်များကို ရေအနည်းငယ်နဲ့ဆေးထုတ်ပစ်ပါ။ကြက်သွန်းစိမ်းပါးပါး၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ ပဲမှုန့်နည်းနည်းထည့်နယ်ပါ။သရက်ချဉ်က ဆားလေးတတ်လို့ ဆားကိုလိုမှထည့်ပါ။အစပ်၊အချိုအတွက် တရုတ်ငရုတ်ခွဲကြမ်းပဲငါးပိ အနှစ်ထည့်ပါ။ငရုတ်သီးစိမ်း ပါးပါးလှီးအုပ်ပါ။ ပုံမှန်သရက်ချဉ်သုပ်ထက် အရသာပိုထူးတဲ့ သရက်ချဉ်သုပ်ရပါပြီ။
ခရက်ဒစ် အကုန် တူ နှင်းနှင်းးး
(ဘာလို့တုန်း ဆို ဇွတ် တောင်းနဲ့ အနော် နဲ့ ညကြီးမင်းကြီး ဆူပူစောင့်အောင့်ထရေးပေးတဲ့ ဟိုလူကြီးကြား ဗျာများရလို့)
ဒါပေမဲ့ ဒါကိုက မိန်းမကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း သိသာနေတာနော့။
အပေါ်မှာ ဂွဇွတ် လိခ် လုပ်ပြီး အောက်ကျမှ ပြန်မြှောက်ပေးထားတယ်
တကယ်ပါဗျာ… တူရို့ဆီ တစ်လ ကိုးသီတင်း သွားနေချင်မိပါရဲ့
(ဒါမှမဟုတ် စားချိန်ကျမှ အလည်သွားရရင်လဲ မဆိုးဘူး)
မွေးစားသား တို့ မွေးစားသမီးတို့ မလိုဝူးလားလို့ မေးကြည့်ပါလားးး
ရတယ်လေ သဂျားရဲ့…ဆန်အိတ် ဆီပုံး ရေမီးအစုံနဲ့သာ လာခဲ့…
ပိုက်ပိုက်အပြည့်ပါမယ်ဆို နှစ်ပေါက်အောင် ထားမယ်… အဟိ
အင်းးး အန်တီနှင်းတော့ ဒီလက်ရာ ဒီဟင်းတွေနဲ့ ဝိတ်ချမယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်
တကယ်တော့ ချက်ပြီးသားလေးစားရရင် ဂွတ်ထ
အဲလာ နှင်းနှင်းကို ဝတုတ်ကြီးဖစ်အောင် ဇွတ်ကျွေးနေတာ
ဝက်ဦးနှောက်က ဒီမှာ ၆လုံးကို မြန်မာငွေ ၁၂၅၀လောက်ပဲကျတယ် ကိုရင်ဆာ…
မိနှင်းနှင်းက ဝ မှာစိုးလို့ မစားတော့ ကျောက်စ်ပဲ ကြိတ်ရတာပေါ့… ဟီ ဟိ
ရှလွတ်…သွားရေခံလိုက်တာ ၅လီတာဗုံးနဲ့ ၃ဗုံးတောင်ရသဗျား…
အသာလုပ်ပါ Lucifer ….
မိုးကြီး ရေလျှံတာ ခင်ဗျားကြောင့် ဖြစ်နေပါ့မယ်…
ကော်ပီကူးလိုက်ပြီ…။ အိမ်က အစ်မကြီးကို ဒီစာရင်းပြပြီး ဒီတိုင်းချက်ပေးလို့ ပူဆာရမယ်…..။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဟင်းလေး အကြိုက်ဆုံး..
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဟင်းက ချက်ဖို့လွယ်ပေမည့် သစ်တိုသီး ရှာရတာ ခက်သကွယ့်…
ကျောက်စ်တို့တောင် မော်လမြိုင်ကရတဲ့ သစ်တိုသီးလေးကို ချွေ စားနေရတာ…
စားကြည့်…ဦးကျောက်စ် ညွှန်းတာနည်းတယ်လို့တောင် ပြောဦးမှာ…
ဟင်းတွေအားလုံး စားချင်စရာတွေ ..
ဒါပေမယ့် အခုတလော ၀ိတ်တက်လို့ အအီစာတွေ လျော့စားနေတာ ..
ဒန်ပေါက်ကို ဦးကျောက်နည်းအတိုင်း တစ်ခါလောက်တော့ ချက်စားလိုက်ပါအုန်းမယ်လေ ..
ကျနော်လည်း စမ်းသပ်မို့ ဝေ။
စားဖိုမှူး တစ်ယောက် တစ်မျိုး စီချက်တဲ့ ဒံပေါက်တွေ စုတင်ရမားလို့ စဉ်းစားနေတာ…
ကျောက်စ်နည်းက မဆလာလျှော့ပြီး ဒိန်ချဉ် ဇီးသီးခြောက်နဲ့ ချက်တာမို့…
လွယ်လည်းလွယ် … သွေးလည်းမတက်ဘူး ခင်ဗျ… ချက်စားကြည့်ပါ မဝေ…
ကိုကို ကျောက်ရယ်လေ အိမ်မပြန်ခင် ချတ်ဘောက်ကနေ မမနှင်းကို ခိုင်းထားသဗျ။
အဲလာ မမနှင်းက အလှဆင်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို
သူက စိတ်မရှည် အော်ချင်ဟောက်ချင် လုပ်သေးတာ။
မမနှင်း ဘက်တော်သား တွေ အများဂျီးရှိလို့သာဗျ။
ထမင်းပွဲ ဟင်းပွဲတွေ စောင့်ကြည့်ခံစားတဲ့ ပရိသတ်ပါဗျာ။
နောက်တစ်ခါဆို မနှင်း စိတ်ကြိုက်ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးမှ
ခီဗျားကြီး ထမင်းစားပါ…။ ဒါဗျဲ…။
တင်းနေတာခင်ဗျ… တင်းနေတာ… ကိုဘလက်ရဲ့
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ… ဟင်းလည်းချက်ရသေး ၊ ကျက်လို့ စားမယ်ဆိုကာမှ…
သူ့ကို လုပ်ကြံမယ်ဆိုရင် အထောက်အထား ကျန်ခဲ့အောင်လား မသိ…
ကင်မလာဂျီးကိုင် ၊ အလှဆင်ပြီး ဓာတ်သေရိုက်မယ်တဲ့…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးလူလူ ပန်းကန်ထဲပုံစားခဲ့တဲ့ဘဝကို လွမ်းမိတယ်…
Facebook မှာ မနှင်းတင်ပြီးသားကြီးတွေ။
ဒီ တင်ပြီးသားတွေကို ပဲ တောင်းပါရစေ။
ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဟင်းများအားကူးယူမှတ်သားသွားပါတယ်။ ကျောက်စ်မောင်နှံရန်ကုန်ပြန်လာပြီး ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပါလားဟင်။ ဗိုက်ဆာလိုက်တာ :sar:
လာမယ် ကြာမယ် တဲ့..
ဟင်းမြည်းတာနဲ့တင် တစ်ပိသာလောက်ကုန်မှာ… အားဟိ
အားပေးမည့်သူများကလဲအသင့် ( အလကား အားပေးမည် )
ငါးဆုပ်ဆန်လှော်ဟင်းစားချင်တယ်.. ဟိုမောင်နှံကိုမေးပေးပါလားဟင်… ၂သီတင်းလောက် ဧည့်သည်လာလုပ်လို့ရလားလို့..
သဲ ရယ် ၄ ယောက် အရင်သွားကြတာပေါ့။
အဆင်ပြေမှ တစ်ရွာလုံး လှမ်းခေါ်မယ်လေ။
ဟယ် ချွိ ကကျောက်စ်က လက်မှတ်ပို့လိုက်မတဲ့လား။ အထုပ်ပြင်ထားရတော့မလားဟင်
အဟိ… မိဇာဂျီးတို့ ဝါးတို့ ခွစ်တို့ ဆိုရင်တော့…
ဆန်တစ်အိတ်လောက်ကို လှော်ပြီး ဝေလငါးနဲ့ချက်မှ လောက်လိမ့်မယ်… အဟိ
ကျုပ်လည်း တစ်ကိုယ်တည်း ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းနေရတုန်းက
ရမ်းသမ်းကွတ်ရင်း ဟင်းမယ် တော်တော်များများ ချက်တတ်သဗျ….
ခုတော့ ပျင်းသွားဘီ..ချက်တော့ဘူး…ကျောက်စ် ပျံလာမှ အိမ်လည်လာပြီးစားတော့မယ်
တကဲ့ မီလန်နာ ဘီးဇီးနက်ကျ အနော့ ကို ချန်ထားတယ်။
ဖိတ်ကျွေးဆို ကျွေးပါ့မယ် ၊ ထမင်းဆိုင်တော့ မဖွင့်ပါရစေနဲ့ ဆြာမိုက်ရယ်…
အရင်းပြုတ်ပြီး ဒေဝါလီ ခံရလိမ့်မယ် ခင်ဗျ…
စိတ်ဝင်စားရင် ဟင်း အပျော်စုချက်စားရင်း… မီးအပူခံလေးနဲ့… ဟီ ဟိ… ဂေ့
ဘူမှ မလာရဲအောင် မမဂျီးပုံပဲ ဖြည့်လိုက်ရ ကောင်းမားးး
ဖွေးဖွေးကို စပါးလင် ဂျင်း ငရုပ်ကောင်းနိုင်နိုင်နဲ့ မွှေးနေအောင် ချက်ပေးမယ်…
လာ… ဂလုစ်လေ… ဒညင်းဝက်ရဲ့… အားဟိ
မားရ်ရယ်… ဒီဘွတော့ ဒီမျှသာပေါ့… အဟိ အဟိ
ဘယ်သူများလဲလို့….နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ လူဇိုးဗိုလ် ဖြစ်နေတာကိုးးးးးး
ဒီပုံတွေ မြင်တော့ သွားရည်ကျသားဗျ…ငါးမြွေထိုးတော့ အသဲယားတယ်…
ကျော့်အမျိုးသမီးလေးဖြစ်လာမယ့် ဟိုခလေးမသာ ချက်ကျွေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ထိ အရသာ ရှိသွားမတုန်းဗျာ……။
အဟက်။ အဟွာပြင်ရမဲ့သူက လေကတော့ မလျှော့သေးဘူးးးး
အဟွာ = အကြိုက်
ဘာမှ ယူမဲ့သူကို ခိုင်းဖို့ မစဉ်းစားနဲ့။
ကွကိုယ် ချက်ပြုတ်တာကို ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားးးး
အနည်းဆုံးတော့ ဟင်းချက်ပျင်းတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ ချက်နည်းဖလှယ်ချင်တဲ့ မမဂျီးတွေမျိုးးး
ကျော့်ကို ချက်ပေးမယ့်သူက Invertebrate တွေကို ကြောက်သဗျ.. လေးကျောက်စ်ရ….
ကျော်ပဲ လေးကျောက်စ့်ဆီ တပည့်လာခံရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ….
ချက်ပေးမဲ့ လူ က????
အဟက်!!! လေကတော့ တစ်ပြားမှ မလျှော့သေးဝူးးး
ငါးမွေထိုးကို ကြည့်ပြီး အသီးမယားနဲ့ကိုရင်ရေ့…
စားကြည့်မှ စွဲသွားရင် နေ့တိုင်း ချက်ခိုင်းနေရလိမ့်မယ်… အဟိ
ကျော့် အနာဟောင်းကို ခင်ညား သံယောင်းမနဲ့ လာမမွှေနဲ့ အူးခင်ဇော်။ ဟိုဇာတ်ကားထဲကလို ပြောရမယ်ဆို ခင်ညားစကားတစ်လုံးတိုင်းဟာ ကျည်ဆန်တောင့်ဖြစ်ရင် ကျော့် ရင်ဟာလဲ ဇကာပေါက်ဖြစ်လောက်ပါပြီ…..ငိ .. ငိ
အေးဗျာ…တစ်ခါတစ်ခါတော့ စိတ်ဓာတ်ကျမိပါရဲ့…။ လက်မလွှတ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်မချတာပါ။
ခုနပဲ ချစ်သ၀ဏ်လွှာ တစ်စောင်ရောက်လာတယ်..
” ငါ ရွာထဲမရှိဘူးထင်ပြီး ၀င်နှောက်မနေနဲ့နော် အနှောက်မ။ နင်ဘာကြံနေတယ် ငါသိတယ်။ အပြောအဆို ဆင်ခြင် နင်သေချင်ပြီလား ”
ငါးဆုပ် ဆန်လှော်ဟင်းကို ချက်နည်းတောင်းပြီး
အိမ်မှာ လက်စွမ်းပြလိုက်တာ စားကောင်းတယ်လို့
နံမည်ရပါကြောင်း ထပ်ဆင့်ထောက်ခံ အပ်ပါသည်….
တစ်နေ့တစ်နေ့ နှင်းတင်မယ့် ထမင်းပွဲလေးတွေ စောင့်ကြည့်နေရတာမို့
ကိုကျောက်စ် ရေ…အမျိုးမျိုး လက်စွမ်းပြ ပါတော့….
အဟိ အဟိ … ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပေးလို့ မအိကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနဲ့…
ချစ်ဇနီး မိနှင်းနှင်း… ပျင်းပြီးပြန်မသွားရအောင် အမျိုးမျိုးချက်ကျွေးမှာမို့ …
ဆက်လက် အားပေးစေလိုပါကြောင်း… အား ဟိ
ဖတ်လိုက် မှတ်လိုက်နဲ့ အတော်သရေကျနေပြီ။
ခက်တာက သူများကို မကျွေးပဲ နှစ်ယောက်စာအတွက်ပဲစီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့။
ပြန်လည်ရင် အိမ်လည် ထမင်းဖိတ်ကျွေးပါလားဟင်…..
(မှတ်ချက် ။ ။ နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း)
ဖြစ်နိုင်ရင် ဂွဇက်တစ်မြို့လုံးကို မီးခိုးတိတ် ချက်ကျွေးချင်တာပေါ့…
ကျောက်စ်မောင်နှံ အိုင်ယာလန်ထီပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနော် မနောဖြူ….
ဒါကတော့ Post of the Day ပါဘဲ။ ဟိ။
အစားမြင်လို့ ကတော့ ဘာနဲ့မှမလဲ။
ပုံပါ ပါတော့ ပိုပြီး မြိုင်သွားသပေါ့။
အပြင်အဆင်ကတော့ ကြယ်ခြောက်လုံး ဘဲ။
စီစဉ်သူ ဇီဇီ ကို ရော၊ ကကျောက်ရော၊ နှင်းနှင်း ကိုပါ ကျေးဇူးပါ။
အမေ့ မှာ အဒေါ် တစ်ယောက် ရှိတယ်။
သူက အဖေ့ ကို အတော်လေး နှစ်သက်ပေမဲ့ ရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ မပြောဘဲ နောက်ကွယ်ရာမှ သူ့တူမ ကို တိုး တိုး ၊ တိုး တိုး နဲ့။
“ညည်း နော်။ ဒီလောက် သဘော မနောကောင်း ဘက်စုံ တော်ပြီး ကိုယ့်ကို ရွှေလို ဥ ဖူးဖူးမှုတ် ထားတဲ့ ကိုယ်တော် ကို ရထားတာ။ ကံကောင်းတယ်။ သူ့ကို စိတ်မညစ်စေနဲ့” တဲ့။
အခုလဲ ဒီလို ဘဲ။
ကျုပ် တူမ “နှင်းနှင်း” ကို တိုးတိုး ပြောစရာရှိတယ်။
အစ်မ နော် ဒန်ပေါက် ကို နော် တကယ်ကြီးချက်ဖို့ အသေအချာ ဖတ်တာနော်။
ကောင်လေးနော် စာကျန် ခဲ့လား။
ဒံပေါက် မဆလာ (ဖာလာစေ့ ၃စေ့ ၊ လေးညှင်း ၆ပွင့် ၊ ဇီးသီးခြောက် သို့ သံပုရာသီးခြောက် တစ်လုံး မပါရင် ထည့်ပါ) 50g ၊
မပါရင် ထည့်ပါ ဆိုတာ ဘာထည့်ခိုင်းတာလဲ မစ်စတာနှင်း ရဲ့။ :-)))
ကျောက်(စ) ဒီမှာ လာဖြေပါဦးးးး
အဟိ… အဟိ အားရတယ် အရီးရယ်…
မိနှင်းနှင်းအကို ကျောက်စ် ယောက်ဖလူပျိုဂျီးက သူ့ညီမကို ကွယ်ရာမှာ…
“ညီမလေး… နင်နော်… ကိုxxx မို့လို့… ဟမ်း” တဲ့…
ကျောက်စ်ကိုလည်း “ခင်ဗျား ဒီလောက် အလိုမလိုက်နဲ့…” တဲ့…
သူနဲ့ကျောက်စ်က သက်တူရွယ်တူ ခင်ဗျ…
ဒယ်ဒီပါပါးချစ်ဖေဖေကလည်း အခုတော့ “သား… ကိုxxx ” တဲ့ ခင်ဗျား… အဟိ
ဒံပေါက် မဆလာ ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုအရီးရဲ့ …
တချို့ ဒံပေါက် မဆလာတွေက အဲသည့်အမယ်တွေ အထုတ်ထဲမှာ အသင့်ပါ ပါတယ်…
အကယ်၍ မဆလာအမှုန့်ချည်းသက်သက် အဲဒါတွေမပါခဲ့ရင်
“ဖာလာစေ့ ၃စေ့ ၊ လေးညှင်း ၆ပွင့် ၊ ဇီးသီးခြောက် သို့ သံပုရာသီးခြောက် တစ်လုံး” ကို
ကြက်သားနှပ်တဲ့ အချိန် ထပ်ဖြည့် ဖို့ပါခင်ဗျာ…
ကျွန်တော်က တပိုင်တနိုင်လောက်ပဲ ချက်နိုင်တာဗျ.. အဲလိုဆို ကျွန်တော် စီးပွားပျက်သွားနိုင်လောက်တယ်.. ဟင့်.. အားကျပါတယ်.. ဒါပေမဲ့… ဒါပေမဲ့…
၁ ရက်တည်း ချက်ထားတာဟုတ်ဘူးလေ။
ဒါ ၇ စာ ချက်ထားတာကို ပို့(စ) တစ်ခုထဲနဲ့ တင်ထားတာမို့လေ။
နောက်ပြီး ဟင်းတစ်ခွက်တည်းထက် ဟင်းစပ် နဲ့ချက်နည်းကို ပိုအဓိကထားတာမို့ပါ။
ကိုရင် တင်နေကျ အတိုင်း ဆက်တင်ပါ။
ရှယ် လက်ရာတွေချည်းပဲ …
ဥငေးတို့ ခလေး မွေးမှ
ဝါးဒီးလည်း ဖွင့်ရင်း ဖြစ်အောင် ကြံရမယ် …
ခလေးမွေးရင် ခင်ဗျားကိုထိန်းခိုင်းလို့ မဖြစ်…
ဘေဘီကျောက်စ်တွေ တေမိလက်သစ် ၆မျက်နှာတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်… အဟိ
ကေပါ.. တပတ်လုံးမှာ တရက်စာ ကောင်းကောင်းလေးချက်ပြီး.. အစပ်အဟပ်တည့်တည့်လေးနဲ့ တင်မယ်ဗျာ… မိန်းမကို နှိ်ပ်စက်နည်းတမျိုးပေါ့.. ဟဲ.. သူကချက် ကိုယ်က ရိုက်.. မြည်း… ပေါ့…
မိန်းမက ပြောပါတယ်.. ပိုးဝင်သွားတာတဲ့…
အဟမ်း..အခုမှ ရောက်တယ်..ဟိ..ကျောက်စ်ညွှန်းလို့..မန့်နဲ့အားဖြည့် အာပေးကြသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့….ဒါလေးတော့ အသိပေးပါရစေ.. တချို့နေ့အတွက် ဟင်းစပ်တွေ စုပြုံပြီး ချက်မစားကြပါနဲ့..နှစ်ယောက်ထဲမို့ ကိုယ်စားချင်တဲ့ဟင်းပဲ ရွေးစားကြလို့ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် လိုက်ချက်စားကြသူတွေ တမျိုးတမည် မဖြစ်စေလိုလို့ပါရှင့်
ဒီလအတွက် နှင်းကျောက်တုံးတို့မောင်နှံရဲ့ဟင်းတွေကို.. သတင်းစာအစားအသောက်ကဏ္ဍထဲထည့်ဖို့ခွင့်တောင်းပါတယ်..။
ထုံးစံအတိုင်း ခွင့်မပေးလဲ ပါအောင်ထည့်လိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း..
အဟွင့်… အာ့များ လာပြောနေသေးတယ်…
ထည့်ပြီးမှ သတင်းစာပို့လိုက်… ပြီးနေတဲ့ဟာကို…ခွိ
ဒီ သတင်းစာတော့ အိမ်တွေ ရဲ့ မီးဖိုချောင်မှာ ကြီးစိုး တော့မှာဘဲ။
Congratulations ပါ ကျောက်စ် နဲ့ နှင်း ရေ။
Kyauk. Cook for us more, pls…